Battery Version: 3.1.1 (All Android) - သန်လျင်သားနည်းပညာ
Home / Android Battery Apk / Battery Version: 3.1.1 (All Android)
Battery Version: 3.1.1 (All Android)
by သန်လျင်သားနည်းပညာ on 22:18:00 in Android Battery Apk
android ဖုန်းတွေမှာ Battery တွေကိုအကောင်းဆုံးထိန်းပေးနိူင်တဲ့ Battery Version: 3.1.1 apk လေးရဲ့
update လေးပါ ။ ဒီကောင်လေးကတော့ မိမိရဲ့ဖုန်းမှာရှိသမျ apk တွေရဲကအလင်းအမှောင်ကို လိုရင်လိုသလောက်ချိန်ပေးပြီး Battery တွေကိုကြာရှည်ခံနိူင်အောင်အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ပေးနိူင်
ပါတယ် သူအလိုလိုချိန်ပေးတဲ့စနစ်ပါရှိပြီး မိမိကြိုက်နှက်သက်သလိုလဲချိန်ပြီးပြီးပြန်ပြင်နိုင်ပါသေးတယ်
Battery ရှိသလောက်သုံးလို့ရတဲ့အချိန်ကိုပါပြပေးတာမို့အကြိုက်တွေ့စေမှာပါ ။
ဖိုင်ဆိုဒ်က 1mb ပဲရှိပြီး Android: 2.2 နှင့်အထက်ဖုန်းတွေမှာအသုံးပြုနိူင်ပါတယ် ။
Battery indicates the battery charge level of your device.Battery isasmall, sleek and elegant app that will help you follow the current battery percentage on your Android device, and even serve asabattery saver. With Battery, every time and everywhere you will know if your battery is charged enough to playagame,amovie, or to browse the web.
✓ Offers quality support for Android devices – from Android 1.5 to Android 4.3
Uploaded : 22-7-2014       18:58
Click to Download (ဒီမှာနှိပ်ဒေါင်းပါ)
By သန်လျင်သားနည်းပညာ at 22:18:00